Cajal: Talooyin WordPress Plugin
Xaaladaha qaarkood, bilowga WordPress ayaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu ku daro shaqeyn dheeraad ah website-kooda. Plugins ayaa la yimid faylasha PHP kuwaas oo ku daraya sifooyinka si aad u isticmaasho mawduuca WordPress iyada oo aan wax ka bedeleynin guud ahaan codeeynta kumbuyuutarka. Si ka duwan sida plugins caadi ah, plugin gaar ah ee WordPress ayaa keydsan doonta shuruudahaaga xitaa markaad bedesho mawduucaaga. Xaaladdan, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad abuurto plugin gaar ah si aad u isticmaasho website-kaaga saxaafadda. Xeerarka internetka intooda badan ma sharaxaan sida loo abuuro plugin WordPress ah oo gaar ah
Qodobkani, oo ay bixiso Andrew Dyhan, oo ah takhasus sare oo ka socda Semt , waxaad baran doontaa habka aad u abuuri lahayd fartaada PHP - sistema reflex camaras. Waxa kale oo aad awood u yeelan doontaa inaad abuurto qashin kaas oo ku dari kara habeynta ama labo boggaaga WordPress.
Waa maxay plugin WordPress ah oo gaar ah
Bogga gaarka ah ee WordPress-ka ah ee loo yaqaan 'WordPress plugin' oo ah qaabka aad ku darsato qashinka aan la socon. Xaaladaha qaarkood, waxaad ku turjumi kartaa 'habka' sida badan 'nidaamyada boggaaga WordPress. Qaar badan oo ka mid ah hababkani waxay ku lug leeyihiin qashin khaas ah oo laga yaabo inay noqoto mid aan loo baahneyn. Iyada oo aqoonkani, waxaad awoodi kartaa inaad ku darto kuwan xadhigaha faylkaaga function.php si aad u hesho saameyntaan. Snippets kuwaas oo ku xiran tahay xasilinta theme hadda. Waxaad istaagtaa inaad iska badasho dhammaan isbeddelka marka aad bedesho mawduuca, bedesho mawduucaaga ama wax ka bedelo qaar ka mid ah shaqooyinkooda. Si kastaba ha ahaatee, plugin-gaar ah bogga ayaa isbedelaya dhammaan isbeddelladan markaad isbedel sameynaysid
Sababaha loo adeegsado isticmaalka WordPress-gaar ah ee WordPress
Kalandarka WordPress-ku gaarka ah ee ku-meel-gaarka ah ayaa keydsanaya isbeddel muhiim ah markaad bedeleyso qeybo badan oo ka mid ah boggagaaga. Waxaa intaa dheer, waxaad ku dari kartaa dhinacyo aan ku kalsoonayn mawduucaaga sida isticmaalka Noocyada Muuqaalka Custom, Ku darida Taageerada Thumbnail WordPress, Ku darista Shortcodes, ama Dib u booqashada soo-booqdayaasha Rasmiga ah
baahida kor ku xusan, waxaad u baahan tahay plugin ama codsiyo xajiya goobaha xitaa markaad bedesho mawduucaaga Qaar badan oo ka mid ah hababka caadiga ah ee socodsiinta gaaban-yaraa waa ku meel gaar. si aad u ilaaliso dhammaan codsiyadaada boggaaga, adigoo keenaya isticmaalka WordPress-khaas ah ee WordPress ah
Xaaladaha qaarkood, qashin-yada waxay sababi karaan guuldarada bogga internetka ah. Tusaale ahaan, newbies waxay ku dhejin karaan erayga ah WordPress iyagoo isticmaalaya qaabka khaldan. Qalabkan wuxuu dhalin karaa shaashad cad oo dhimasho ah, dhacdo taas oo horseedi karta in lumiyo goobta oo dhan ama isbadal aan la badbaadin. Xaaladaha kale, dadka isticmaala qashinqadooda waxay isticmaalaan gadaashka WordPress. Qalab WordPress ah oo gaar ah ayaa ah qaab amaan ah oo lagu tijaabiyo xeeladaha cusub
Abuuritaanka plugin WordPress ah oo gaar ah
Tani waa hannaan toos ah. Waxaad ubaahan tahay inaad abuurto gug cusub oo ku jira tusaha bogagga WP ee boggaaga. Tusaale: / wp-content / plugins / fartaada-plugin /
Goobtan, samee faylka oo ku dar faylka PHP. Hubi inaad isticmaasho magac feyl la mid ah magaca faylka. Tusaale ahaan, waxaad u isticmaali kartaa koodhka fudud,
Magaca Plugin: Site Plugin for thisexample.com
Sharaxaad: Beddelka koodhka gaarka ah ee bogga ee ku saabsan isugeynta buug-yarahan
/ * Bilaabidda Ku darista Hawlaha Hoosaadkan * /
/ * Jooji Ku daridda Hawlaha Hoosaadkan * /
Waxaad markaa ku dhejin kartaa oo ku kaydin kartaa fiilada ku jirta diiwaankaaga ee ku yaal WordPress. Xusuuso inaad kiciso fiilada